पुर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरामा गर्नुभएको सम्बोधन, २०७६ पुस १० : - MadhavNepal.com
पुर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरामा गर्नुभएको सम्बोधन, २०७६ पुस १० :
आजको यस कार्यक्रमका सभापति महोदय, मञ्चमा आसिन सवै नेता कमरेडहरु, विद्यार्थी नेताहरु र भर्खरै यस गौरवशाली क्याम्पस पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा भर्ना भएका नवआगन्तुक विद्यार्थी साथिहरु, तपाईहरुलाई म पनि यस क्याम्पसमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु । तपाईहरुलाई स्वागत गर्नका लागि नै म काठमाडौंबाट यहाँ आएको छु ।
तपाईहरुसँग भेट हुँदा मलाई आजभन्दा ५२ बर्ष अघिको घटना सम्झना भइरहेको छ । २०२४ सालमा, जतिवेला म क्याम्पसमा भर्ना भएको थिएँ, त्यसको २ बर्षपछी विद्यार्थी नेताका रुपमा वीरगंजका सडकमा सुस्ता हाम्रो हो, राधिकापुरको बाटो हामीले पाउनैपर्छ भन्ने नारा लगाउँदै हामी हजारौंको संख्यामा सडकमा उत्रेका थियौं । मलाइ सम्झना भइरहेको छ, त्यो दिन पञ्चायत विरुद्ध हामी अधिकारका लागि, संगठनका लागि लडाइ गरिरहेका थियौं । माग गरिरहेका थियौं- हामीलाई स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन चाहियो ।
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा, सौभाग्य मेरो कस्तो सीक्वेन्स मिलेको छ भने, यो विद्या-विधान र संविधान बनाउने जिम्मा प्राय मेरै परेको रहेछ । त्यतिवेला पनि स्ववियुको विधान वनाउनका लागि क्याम्पसका विद्यार्थीहरुबीच चुनाव भएको थियो । त्यो चुनावमा (२०२६ सालमा) ठाकुराम क्याम्पसको चुनावमा म विजयी भएको थिएँ । त्यतिवेला जगतमोहन अधिकारी क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । मोहन लाखे, त्यहाँको डेपुटी चिफ हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरु सहित हामी वसेर कस्तो स्ववियु बनाउनुपर्छ भनेर छलफल गरेका थियौं । विधान बनाएका थियौं । अघि मैले चर्चा गरें, सीक्वेन्स कस्तो मिलेको छ भने, २०४७ सालमा जव हामीले पञ्चायती व्ववस्था ढालेर बहुदलीय व्यवस्था ल्यायौं । त्यतिवेला संविधान बनाउने ९ जनामध्ये १ जना म पनि थिएँ । म, भरतमोहन अधिकारी अनि निर्मल लामा बामपन्थी तीन जना । तीन जना कांग्रेसका प्रतिनिधि । तीन जना राजाका प्रतिनिधि । एक तिहाइ, एक तिहाइ, एक तिहाइ । यसले देखाउँछ राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई ।
२००७ सालको सन्तुलन के थियो भने, एक तिहाइ राणा थिए, एक तिहाइ राजा र एक तिहाइ कांग्रेस थिए, कम्युनिष्ट पार्टीलाई छिर्न दिएका थिएनन् । २०४७ सालमा के भयो ? एक तिहाइ कांग्रेस, एक तिहाइ कम्युनिष्ट र एक तिहाइ राजा । त्यसपछी के भयो थाहा छ ? २०६३ सालमा जव शक्ति सन्तुलन परिवर्तन भयो, एक तिहाइ कांग्रेस, दुई तिहाइ कम्युनिष्ट बन्न पुगे । यसले के बताउँछ भने, नेपालको राजनीतिमा कम्युनिष्ट पार्टी जनताको बीचमा लोकप्रिय छ । जनताले कम्युनिष्ट पार्टी मन पराउँछन् । कम्युनिष्ट पार्टीलाई साथ दिन तयार छन् ।
दुई बर्षअघिको चुनावको परिणामले पनि देखाएको छ, स्थानीय तहमा ७५३ तहमध्ये करिव साढे ४ सय ठाउँमा हामीले जित्यौं । सात वटा प्रदेशको सरकारमध्ये ६ वटा सरकार हामिले बनायौं । कुनदिन अर्को प्रदेशमा पनि हामी सरकार संचालन गर्ने ठाउँमा पुग्न वेर छैन । केन्द्रमा हामीले झण्डै दुईतिहाइ ल्यायौं । अहिले सरकार चलिरहेको छ, अघि बढिरहेको छ ।
विद्यार्थी भाइबहिनी हो, आज तपाईहरु यस क्याम्पसमा ग्रयाजुएसन र माष्टर डिग्री गर्न आउनुभएको छ । मैले पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा पढ्ने मौका त पाइन । मैले वीरगंजको ठाकुराम क्याम्पसमा पढें । काठमाडौंको त्रिचन्द्र कलेजमा पढें । पाटन क्याम्पसमा पढें र महेन्द्र मोरङ क्याम्पस बिराटनगरबाट ग्रयाजुएसन गरें ।
राजनीतिक यात्रा मात्रै होइन, जागिरको यात्रा मात्र होइन, मेरो पढाइको यात्रा पनि विभिन्न ठाउँ हुँदै अघि बढ्यो । आज तपाईहरुको बीचमा उभिएर केही कुरा राख्दै गर्दा केही महिनाअघि माल्दिभ्सको एक विश्वविद्यालयमा सम्वोधन गरेको याद भइरहेको छ । केही समयअघि म्यासेडोनियाको इन्टरनेसनल बाल्कोनी युनिभर्सिटीका विद्यार्थी सामु मैले सम्वोधन गरेको सम्झना भइरहेको छ ।
म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु- तपाईहरु देशको कर्णधार हो । देशको कर्णधार बन्न के गर्नु पर्छ ? विद्यार्थी भन्ने वित्तिकै के जोडिन्छ ? पढाइ । त्यहि हो मैले भन्न खोजेको । पढाइ भन्ने वित्तिकै के बुझिन्छ ? म त्यो वताउन चाहन्छु । मैले माल्दिभ्समा गरेको भाषणको एउटा अंश सुनाउन चाहन्छु । युनेश्कोले परिभाषा गरेको छ - Learning to know, learning to do, learning to live together, and learning to be. के बन्न चाहनुहुन्छ तपाई ? शिक्षाले ज्ञानको दायरालाई फराकिलो बनाउँछ । शिक्षाको गहिराइलाई बुझ्नुपर्छ । हामी जतिवेला विद्यार्थी थियौं । राजनीतिमा हाम फाल्यौं । पार्टीको नेता भयौं । हामी कस्तालाई रोज्थ्यौं थाहा छ ? पढाइमा तेज, टपरहरु ।
फिलिपिन्समा म गएको थिएँ, त्यहाँका कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु एक से एक टपरहरु । विज्ञानका टपरहरु । कमर्सका टपरहरु । किनभने इमान्दार मानिसहरु मेहनेती हुन्छन् । मेहेनेती मानिसहरु सफल हुन्छन् । ठग्ने मानिसहरु के हुन्छन् ? विद्यार्थीहरुले के ख्याल गर्नुपर्यो भने, मैले भनेको ४ विषय मध्ये Learning to know, learning to do, learning to live together, and learning to be । जस्तो सुकै कठिन अवस्थामा नआत्तिएर त्यसको सामना गर्ने त्यो क्षमता तपाईहरुलाई शिक्षाले दिन्छ । अध्ययनले दिन्छ । तेस्रो learning to live together, समाजलाइ एकतावद्ध बनाउने कुरामा यसले मद्धत गर्छ । हाम्रो समाजमा नकारात्मक कुराको प्रचार बढी भएको छ । मानिस निराशा, हताशा, मानसिक तनाव लिने होइन, चुनौति सामना गर्ने आँट हुनुपर्छ । अरुले नगरे आफुले गरेर देखाउँछु भन्ने आत्मविश्वास हुनुपर्छ । त्यस्तो कर्णधार हामीलाई चाहिएको छ ।
जो इमानदार हुन्, हप्ता उठाउने होइन है । नेता बनेको छ, पदको दुरुपयोग गर्ने होइन । अनेरास्ववियुका विद्यार्थीहरु, तपाईहरु मार्क्सबाद लेनिनबादलाई निष्ठाका साथ स्वीकार गरेका, मार्क्सका चेला बन्ने हो । तपाईहरु लेनिनजस्तो समाजलाई परिवर्तन गर्ने संकल्प बोक्ने योद्धा बन्ने हो । तपाईहरुले संसारलाई बुझ्ने, समाजलाई बुझ्ने, प्रगतिलाई बुझ्ने र समाजलाई परिवर्तन गर्ने योद्धा बन्ने संकल्प लिने हो । पढाइ राम्रो बनाउने र व्यक्तित्व पनि माथी उठाउने, समाजको पनि सेवा गर्ने, सवैलाई सहयोग गर्ने भावना लिएर अघि बढ्ने हो । आफ्नो व्यक्तित्व कसरी माथि उठाउने र व्यक्तिगत जिम्मेवारीलाई पुरा गर्ने ? यो चौथो कुरा पनि पढाइले तपाईहरुलाई सिकाउँछ । त्यसैले शिक्षा यस्तो चिज हो जसले मानिसमा रहेको खुवी र क्षमता उजागर गर्दछ । त्यसैले यो समयलाई खेर नफाल्नुस् । तपाईका सामाजिक जिम्मेवारीहरु पनि छन् । तपाईका राष्ट्रिय दायित्वहरु पनि छन् ।
मलाइ खुसी लाग्यो । तपाईले यहाँ प्रस्तुत गरेका गितहरु अत्यन्तै देशभक्तिपुर्ण भावनाले ओतप्रोत थिए । देशलाई माया गर्ने गितहरु, नेपाली भावना जागरित गर्ने गितहरु, सवै नेपालीलाई एकतावद्ध बनाउन सहयोग गर्ने गितहरु यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसैले विद्यार्थी नेताहरुलाई बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु । अनेरास्ववियुको संस्कृति भनेको देशभक्तिपुर्ण र जनप्रिय संस्कृति हो । यो जनतासँग मिसिन चाहन्छ । देशसंग एकाकार हुन चाहन्छ र सवैमा देशभक्तिपुर्ण भावना बढाउन चाहन्छ । त्यसैले अनेरास्ववियुलाई के भनिन्छ भने, यसले देशभक्ति र आम नेपाली जनता र विद्यार्थीहरुलाई आत्मविश्वासको भावनाका साथ उनिहरुको दैनिक समस्याहरु सम्वोधन गर्ने कुरालाई ध्यान दिन्छ । यसअर्थ देशभक्ति, अनेरास्वियुको मुल झण्डा रहंदै आएको छ । परिवर्तन यसको मुल झण्डा रहेको छ । त्यसैले परिवर्तनको महान अभियानमा तपाईहरु जुट्नुभएको छ ।
हामीले राजनीतिक क्रान्ति सफल गर्यौं । राजतन्त्रलाई उन्मुलन गर्यौं । धेरैले पत्याएका थिएनन् । विश्वास गरेका थिएनन् । म त्यसको साँची छु । वुटवलमा हामीले पहिलो सभा गरेका थियौं । राजतन्त्रको विरुद्धमा गणतन्त्रको उद्घोष गर्दै । त्यसले देशभरी तरंग ल्यायो । आत्मविश्वास जगायो र अहिले कम्युनिष्ट पार्टी झण्डै दुई तिहाइको हैसितमा पुग्न सफल भयो । यहि पोखरा नगरको मैले सम्झिरहेको छु । युवासंघको आव्हानमा, सडक जुलुस आव्हान भयो । संख्या कहिले बढि हुन्छ, कहिले कम । यहाँका नेताहरुले आन्दोलनलाई अघि बढाउनुभएको थियो । उहाँहरु यहि क्याम्पसका उत्पादन हुनुहुन्छ । उहाँहरुले अनेरास्वियुको इज्यत, प्रतिष्ठा माथि उठाउनुभयो । त्यसैले उहाँहरुलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
आज तपाईहरु यस क्याम्पसमा आउनुभएको छ, गौरभबोधको भावनासाथ । गौरवशाली इतिहास बोकेको यस क्याम्पसमा, गौरवशाली इतिहासको सिर्जना गरेका आफ्ना अग्रज नेताहरु अध्ययन गरेको यस क्याम्पसमा पढ्ने अवसर तपाईहरुले पाउनुभएको छ । आफ्नो नाम, परिवारको नाम, समाजको नाम र संगठनको इज्यतलाई माथि उठाउँछु भन्ने लक्ष्यले अघि बढ्नुभएको छ । राम्रो आचरण र व्यवहार आफु पनि गर्ने र अरुलाई पनि गर्न प्रेरित गर्ने भावना बोकेर तपाईहरु यहाँ आउनुभएको छ । तपाईहरु क्याम्पसको पढाइमा पनि सफल हुनुहोस् । सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गर्ने कुरामा पनि सफल हुनुहोस् । क्याम्पसको इज्यतलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनुहोस् । आफ्नो क्षेत्रमा कीर्ति कायम गर्नुहोस् ।
यस क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु एक से एक नेता हुनुभयो तर नेता मात्र भएर हुँदैन । एक से एक प्रशासकहरु, एक से एक राजदुत, समाजसेवी, उद्यमि, डाक्टर इन्जिनियर सहित समाजको सवै क्षेत्रको अगुवा हुनुपर्छ । समाजको सवै क्षेत्रमा राम्रो काम गर्ने, शिर निहुर्याउने काम गर्ने होइन । अनेरास्ववियुको झण्डालाई निरन्तर फहराएर अघि बढ्ने संकल्प गरेर अघि बढ्नुस् धेरै धेरै शुभकामना छ ।
नयाँ बर्ष आउँदैछ, २०२० । भिजिट नेपाल २०२० । जतिवेला म प्रधानमन्त्री थिएँ, त्यतिवेला मैले भिजिट नेपाल २०११ सुरु गरेको थिएँ । हेर्दा हर्दै २०२० भइसकेछ । भिजिट नेपाल २०२० मा पोखरा आकर्षणको केन्द्र हो । पोखरामा जतिपनि अतिक्रमण भएका छन् । त्यो अतिक्रमणबाट मुक्त गर्नका लागि र कुनै पनि क्षेत्रमा बिकृति र भ्रष्टाचार, सरकारी सम्पतिको हिनाविना भइरहेका छन् भने त्यस्तो अनुचित कामलाई साथ दिने होइन ।
जनताको समस्या गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी र सुरक्षाको जिम्मेवारी राज्यको हो । त्यसैले पढाइलाई अनिवार्य गर्ने मात्र होइन, त्यसको जिम्मेवारी राज्यले लिने हो । हामी समाजवादको यात्रामा अघि बढ्ने संकल्प लिएका छौं । समाजवादउन्मुख अर्थनीति अवलम्वन गर्ने कुरा गरेका छौं । समाजवाद उन्मुख दिशामा अघि बढ्ने संकल्प गरेका छौं । त्यो समाजवाद भनेको सामाजिक न्यायसँग जोडिएको हुन्छ । सवैको हित र कल्याणसँग जोडिएको हुन्छ । आमरुपमा गरिव र पिछडिएका जनसमुदायप्रति विशेष जिम्मेवारीबोधसँग जोडिएको हुन्छ । त्यो समाजवाद, पुँजीवाद होइन । हामी समाजवादको दिशामा अघि बढ्ने हो । यो कम्युनिष्ट पार्टीको उद्धेश्य पनि हो । संसारका मानवजातिको चाहना पनि हो । बिश्व मानवको कल्याणका लागि, नेपाली समाजको रुपान्तरणका लागि अव हामी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरणको महान यात्रामा अगाडी बढिरहेका छौं । हाम्रो कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा भएको केन्द्रीय सरकार, यो गण्डकी प्रदेश सरकार, यहाँको महानगरपालिका, इमानदारीपुर्वक जनचाहना बमोजिक अघि बढ्नुपर्छ । काममा त्रुटी भए सच्याउनुपर्छ ।
अस्ति भर्खर यहाँ भएको उपनिर्वाचनमा विद्या भट्टराईलाई जिताउन तपाईहरु जसरी लाग्नुभयो र सुर्यलाई चम्काउन जुन भुमिका खेल्नुभयो । सिंगो पोखराबासीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छ । तपाई विद्यार्थी साथिहरुलाई पनि धेरै धेरै बधाइ र शुभकामना दिन चाहन्छु । विजयको यात्रालाई निरन्तर रुपमा जारी राख्दै जानुस् । यात्रामा अघि बढदै जानुस् । संसारमा असम्भव भन्ने केही पनि छैन । यदि सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्ने संकल्प गर्नुहुन्छ भने पनि सम्भव छ । त्यसैले आँट गर्नुस् आत्मविश्वास राख्नुस् । लागिरहनुस् । सफलता निश्चित छ । धन्यवाद ।